Ihe akara ahụ pụtara na karama mmanụ dị mkpa
Dị ka ọ dị, e nwere ihe ịrịba ama anọ dị na karama mmanụ a nụchara anụcha, ya mere ka anyị lelee nkọwa dị iche iche ha na-anọchi anya: 1. Mmanụ Mkpa Dị Mkpa Dị Mkpa Dị Mkpa Dị Mkpa Mmanụ na-ekwu na ọ dị ọcha, enweghị kemịkalụ wuruwuru gbakwunyere ma etinyebeghị ya na mmanụ . 2. Aromatherapy mmanụ mmanụ aromatherapy ...
Olee otú ịhọrọ ikike na nkwakọ ngwaahịa dị mkpa karama？
Ebe ọ bụ na mmepe ụlọ ọrụ ọgbara ọhụụ mere ka iko iko, ọchịchịrị (nke Tawny, green, na-acha anụnụ anụnụ) mee ihe n'ụzọ zuru ebe niile ejirila karama mmanụ mkpa dị mkpa. acha anụnụ anụnụ, dịka ọmụmaatụ, ntu oyi ...
Dochie rattan aromatherapy mgbe niile
Mepee ihe nkwụsị karama ahụ, gbanye otu njedebe nke rattan na mmiri aromatherapy, wepụ ya mgbe rattan gwụchara, wee tinye isi nke ọzọ n'ime karama ahụ. Ọ bụrụ na ejiri ya na obere oghere (dị ka ime ụlọ ịwụ), enwere ike itinye obere mkpanaka rattan iji nweta mmetụta ahụ; ọ bụrụ ...
Usoro nke ịgbakwunye mmanụ na karama iko
Nzọụkwụ iji mejupụta karama ochie mmanụ na-esi isi ụtọ dị ka ndị a: a. Richaa karama na-esi ísì ụtọ na mmiri. Mgbe ahụ, tinye ntakịrị mmiri mmanya na mmiri n'ime karama ahụ, wee hichaa ya nke ọma. Nzọụkwụ a bụ maka ọgwụ nje. A ghakwara ikpocha sirinji nke ọma. & nb ...
COMI AROMA Reed Diffuser Atụmatụ
site ha na 20-12-11
Gịnị bụ ahịhịa amị na-arụ ọrụ ma olee otu ha si arụ ọrụ? Ndị na-ekesa mmiri dị na Reed na-ewu ewu ugbu a. Ha dị nnọọ mfe iji; A na-etinye ahịhịa n'ime karama iko ma ọ bụ ite iko nke mmanụ na-esi ísì ụtọ, ahịhịa ndị ahụ na-esi ísì ụtọ ma na-eme ihe na-esi ísì ụtọ gburugburu ụlọ gị - ...
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ imegharị karama iko ahụ?
N'ime ndụ anyị kwa ụbọchị, karama karama bụ ezigbo enyi maka ihe ọ bottlesụ drinksụ, ọgwụ, ihe ịchọ mma, wdg.A na-ele karama iko ndị a anya dị ka ihe nkwakọ ngwaahịa kachasị mma n'ihi mma ha mara mma, ezigbo nkwụsi ike kemịkal, enweghị mmetọ. ka ọdịnaya, ca ...
Olee otú ịkpụzi usoro nke karama?
Site na mmepe karama mmanụ, a na-enwewanye karama mara mma maka ndị ọrụ ịhọrọ. Yabụ kedu ka esi kee ụdị karama ndị a? Thekpụzi usoro nke karama iko bụ usoro nke omume (igwe, kọmputa, wdg) ugboro ugboro na usoro mmemme enyere ...
Ojiji nke karama tube kwa ụbọchị
site ha na 20-12-10
E kewara karama abụọ na ụdị abụọ, otu bụ karama a kpụrụ na nke ọzọ bụ ọkpọ ọkpọ ọkpọ. Kpụrụ karama na-adịkarị ji maka aromatherapy, senti, mkpa mmanụ, wdg The nnukwu mma nke na-akpụzi karama bụ na ọ bụ dịtụ arọ na ọ dịghị mfe na-ebu, mgbe nke ...
Etu esi amata ọdịiche dị n’etiti karama akpụ na karama
A na-ekewa ụzọ eji emepụta karama iko na ịkpụzi na ọkpọkọ, yabụ kedu isi ọdịiche dị n'etiti karama akpụ na karama ọkpọ? Anyị ga-enyocha akụkụ atọ ndị a: 1. Ọdịdị dị iche, ọdịdị nke karama ahụ na-enwu gbaa, ọ dị mma karịa, ...
Akụkọ banyere iko
site ha na 20-12-04
Akụkọ ihe mere eme nke ị glassụ iko na-alaghachi na Mesopotemia n'ihe dị ka afọ 3500 T.O.A. site na ...
Olee otú egosipụta etolite ke otu iko senti karama？
Na mmepụta nke karama mmanya iko, afụ bụ otu n'ime nsogbu ndị na-agbagha ụlọ ọrụ mmepụta mgbe niile. Ọ bụ ezie na egosipụta adịghị emetụta ogo ahụ, ha na-emetụta aesthetics.Ọ kachasị na ụfọdụ karama na-esi isi ísì ụtọ, a naghị ekwe ka egosipụta dị adị. Na ...
Otu esi agwakọta mmanụ dị mkpa
site ha na 20-12-03
Usoro nke ịgwakọta mmanụ dị mkpa Mmanụ ndị dị mkpa dị oke ọnụ ma na-agbanwe agbanwe n'ụzọ dị mfe, yabụ a ga-akpachara anya mgbe ị na-akwadebe ha. Kwadebe nsị 4 ~ 5, jiri mmiri mmiri dị iche iche maka mmanụ dị mkpa dị mkpa. Ọ gaghị adabara ịhazigharị ihe n'otu oge iji zere mkpofu.
Rightzọ ziri ezi iji chekwaa mmanụ dị mkpa
1. Tinye mmanụ ndị dị mkpa n’ime karama iko iko dị mkpa mmanụ ndị dị mkpa na-agbanwe agbanwe, na-eguzogide ọkụ, ma na-emebi emebi, yabụ a ga-echekwa ha n’ime karama iko. Enweghị ike iji karama pọọsụ chekwaa mmanụ dị mkpa. Ogo nke mmanu di nkpa gha emebi ma oburu na ihe omimi nke plastic i ...
Mmepụta usoro nke karama tube karama
site ha na 20-11-27
Taa, anyị ga-akpọrọ gị ịghọta usoro mmepụta nke karama iko karama: Nke mbụ, fanye iko iko nke otu dayameta onye ahịa chọrọ n'ime igwe ahụ. Nna-ukwu ga-edozi igwe ahụ nke ọma ma mee ka iko iko ahụ gbanye ogologo karama ya na bayoneti ma ọ bụ scr ...
Kedu ihe nọmba pụtara na ala kalama ahụ?
Anyị na-ahụkarị akwụkwọ ozi ma ọ bụ Ọnụ Ọgụgụ na ala nke karama iko. Ọtụtụ ndị ahịa na-ajụ ihe Nọmba ndị a pụtara. Gịnị ka ha na-anọchi anya ya? Abụkarị karama mmepụta ngwá bụ: akara igwe, ntuziaka igwe, inverted igwe, ya usoro bụ a na ngwá nwere ike ikpokọta na otutu tent nke ebu ...
Nghọta ziri ezi nke mmanụ dị mkpa
site ha na 20-11-26
1. Gịnị bụ mkpa mmanụ Gịnị bụ mkpa mmanụ? N’okwu layman: Mmanụ dị mkpa bụ ụdị “mmanụ”, ụdị mmanụ pụrụ iche. Ihe mere o ji di puta iche bu na o di oke onu ma dikwa nfe, n'ihi na obu mmanu di nkpa, nkpuru obi osisi, na ihe ndi emeputara ...
Ihe kpatara ọnụahịa dị iche iche nke karama iko
Okpokoro iko ndị ahụ bụ nsi? A na-eji karama iko ndị Taobao rere maka dollar ole na ole echekwa nri. Ọ dị mma ịme mmanya ma ọ bụ mmanya? Ọ ga-agbari bekee? Gini mere eji ere iko mba ofesi na ere oke onu? Ndi iko iko ndi ozo adighi nma fe Gla ...
Okpukpo-isi na-ewetara gị uto mara mma
site ha na 20-11-19
E nwere okwu a na-echefu echefu na The Song Dynasty literati na “Dream Lianglu”: “Na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na-atụ tii, dobe foto ma dozie okooko osisi, ụdị anọ dị iche iche, ọ bụghị ụlọ ike gwụrụ. Ihe izugbe ya bu: wan ...
Ulo olu ahia onu ahia zuru ụwa ọnụ
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ahịa iko karama zuru ụwa ọnụ, nke ruru anyị $ 63.77 na 2019, ga-eru US $ 105.44 na 2027, yana onyinye kwa afọ eto nke 6.5% n'oge t ...
Igosipụta ihe bụ isi ihe dị na mmepụta karama iko
Ogo nke karama iko nwere njikọ chiri anya na imewe na ihe onwunwe mma, mmepụta akụrụngwa, na ebu n'ichepụta. Ngosiputa bu ihe di oke nkpa na mmeputa. Ofgba akaebe na-emetụta mmepụta mmepụta na ogo nke karama iko ahụ, yabụ na a ga-ewere ya nke ọma. 1. Nke ...
Gịnị bụ frosting na hollowing technology nke iko karama
Frosting technology bụ itinye a oyi akwa nke pickling ngwọta ma ọ bụ ụfọdụ iko na agba glaze ntụ ntụ na karama ngwaahịa, na mgbe elu okpomọkụ mmiri na 580 ~ 600 ℃, iko agba glaze mkpuchi na-agbaze n'elu nke iko karama na-eme ya gosiputa ihe icho mma nke di iche ...
Production na nkwakọ usoro nke iko karama
site ha na 20-11-13
Enwere usoro 6 site na imepụta gaa na nkwakọ ngwaahịa maka karama iko: Batch 、 Na-agbaze 、 、gba 、 、 、 aling aling aling aling pection Nnyocha 、 Mbukota. Ogbe a na-agwakọta ihe ndị dịka aja, silicone, na nkume lime ma na-ejupụta n’ime ọkụ ahụ. Ihe na-agbaze agbaze na-agbaze agbaze n'ime oku. Anyị ...
Nzuzo nzuzo nke Flameless aromatherapy-Natural rattan VS Fiber rattan
Eke rattan: Rattans na-abụkarị osisi okike dị ka osisi ọcha, willows / vine ma ọ bụ ahịhịa amị. Isi abụọ nke osisi vaịn ahụ jupụtara na pores, ogologo na nkwụsị nke ọ bụla dịtụ iche. Eriri rattan: N'ihi na rattan mere nke eriri, na pores nke rattan na-evenly kesaara t ...
Uru nke aromatherapy na-enwu enwu
E nwere ọtụtụ ụdị aromatherapy, flameless aromatherapy, kandụl aromatherapy, ụgbọ ala aromatherapy, wdg Ọ bụla ụdị aromatherapy nwere uru na ọghọm ya. N’isiokwu a, anyị ga-atụle uru nke aromatherapy na-enwu enwu. & ...
Ihe akara ahụ dị mkpa oi ...
Olee otú ịhọrọ ikike na nkwakọ ...